Safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa oon shaqayn doonin maanta - Halbeeg News
Safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa oon shaqayn doonin maanta
ADDIS ABABA (HALBEEG) – Safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa ayaan shaqeyn doonin maanta oo Arbaca ah, sida lagu sheegay war qoraal ah oo lagu daabacay bogga safaaradda.
Tallaabadan ayaa la xiriirta dibadbaxyo waaweyn rabshadana wata oo la filayo in ay maanta ka dhacaan xarunta dalka Itoobiya ee Addis Ababa.
“Taxaddar dheeri ah oon qabno dartiis, Safaaradda Maraykanku waxay joojineysaa shaqooyinkeedii maanta oo Arbaca ah September 19, sababo la xiriira dibadbaxyo waaweyn oo la filayo in ay Addis Ababa ka dhacaan” qoraalka ayaa sidaas lagu yiri.
Dowladda Maraykanka ayaa dhanka kale sheegtay in maanta sidoo kale aanay shaqayn doonin Machadka Cilmi Baarista Satchmo iyo Xarunta Maraykanka ee Talo Bixinta Waxbarashada oo labadooduba hoos taga Safaaradda Maraykanka.
Dhammaan dadkii fiisooyinka ka sugayey safaaradda iyo muwaadiniinta Maraykanka ee ballamaha safaaradda ku lahaa maanta, waxaa lugu wargeliyey in ballamihii hore la joojiyey, sidaas darteed laga doonayo inay mar kale dib qaab online ah balammo ugu qabsadaan iyagoo adeegsanaya website-ka safaaradda.
Toddobaadkan gudihiisa ayey ahayd markii digniin kasoo baxday isla Safaaradda Addis Ababa lagu faray Muwaadiniinta Maraykanka in muddada u dhexeysa 14-17 September aanay usoo safrin magaalada Addis Ababa.
Digniinta Dowladda Maraykanka iyo shaqo joojinta ay samaysay Safaaradda Addis Ababa, waxay la xiriirtaa cabsida laga qabo rabshadaha isirka ku salaysan ee dhiigga badanina ku daatay ee maalmihii u dambeeyey ka dhacayey deegaanno ku dhow dhow xadka Addis Ababa la wadaagto gobolka Oromada.
Madaxda Deegaanka Soomaalida iyo hoggaamiyeyaasha ONLF oo Asmara ku kulmay
Maamulka Hirshabeelle oo heshiis la galay Dowladda Federaalka